सञ्चारमाध्यममा मादक पदार्थको विज्ञापन रोक्ने कि ? - AahaSanchar
Home आहा बिचार सञ्चारमाध्यममा मादक पदार्थको विज्ञापन रोक्ने कि ?
धुम्रपान तथा मध्यपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बस्तुहरु हुन् । त्यही भएर सरकारले खुला तथा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न निषेध गरेको छ । यस अघि नैं सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा सरकारी कर्मचारी तथा सेवाग्राहीहरुलाई पान मसला, पान पराग, गुट्खा, चुरोट, खैनी, बिँडि तथा सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्न नियम कानून बनाएको थियो । त्यो नियम यतिबेला देशका अधिकाँश गैर सरकारी तथा नीजि कार्यालयहरुमा पनि लागू भएको छ ।
खयर, उक्त नियम पूर्णं रुपमा भने अहिले पनि पालना भैसकेको छैन । तर पनि कार्यालय समयमा ती बस्तुको सेवन गर्नमा पक्कै पनि कमि भने आएको छ । खुलेयाम सेवन गर्नैहरु अझै पनि लुकिचोरी खाने गरेका हामी सबैले देख्ने गरेका छौ ।
यसरी खुला तथा सार्वजनिक स्थानमा चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्दा सेवन गर्नेलाई त असर गर्छ नैं त्यसको वरीपरी तथा छेउमा रहेका अन्य ब्यक्तिहरुलाई पनि त्यसको धुवाँले असर पु¥याउने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको भनाई छ । जसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘प्यासिभ स्मोकर’ भनिन्छ । यसका अलवा त्यसले पार्ने अर्को ठूलो असर भनेको खुला स्थानमा धुम्रपान गर्दा साना बालबालिकाले आफु भन्दा ठूला अभिभावकहरुले चुरोट तानेको देख्छन् र त्यसैको सिको गर्न सक्छन् । त्यसैले सर्वजनिक स्थलमा धुम्रपान नगर्नु आफु र आफ्ना सन्नतीका लागि हितकर देखिन्छ ।
स्वस्थ नागरिक र स्वस्थ समाज निर्माण गर्ने सरकारको दायित्व हो । किनकी सरकार नैं आम नागरिकको अभिभावक पनि हो । त्यसैले पनि सरकारले यस्तो प्रयास अनि कदम अघि बढाएको हो । सरकारले चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन कुनै पनि प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रोनिक मिडियामार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाउने नियम करिव एक दशक भन्दा बढी समयदेखि लागू गर्दै आएको छ । यसले गर्दा पनि प्रत्यक्ष रुपमा ससना नानी बाबुहरुलाई सुर्ति सेवनबाट जोगाउन मद्धत पुग्दै आएको छ ।
जसरी सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापनमा रोक लगाएको छ र त्यस्ता सामाग्रीको खोलमा क्यान्सर जस्तो घातक रोगको चित्र अंकित गर्न बाध्य बनाएको छ त्यसैगरी मदिराजन्य पदार्थहरुको पनि सञ्चारमाध्यममार्फत विज्ञापन गर्न रोक लगाउनु आजको अर्को आवश्यकता बनेको छ । मिडिया भनेको समाजका लागि राम्रोकाम गर्न, राम्रोको प्रोत्साहन र प्रबद्र्धन अनि पथ प्रदर्शन गर्नका लागि हो । समाज बिगार्न र गलत दिशातिर समाजलाई लैजानका लागि मिडिया र त्यसका कुनै पनि कन्टेन्टहरु दूरुपयोग गरिनु हुँदैन । मिडियाको पहिलो दायित्व भनेकै समाजलाई अग्रदिशातर्फ लैजाने हो नकि अर्थ आर्जन गर्ने । त्यसैले मिडियालाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो ।
त्यसैले सबै मिडियाले रक्सि, वाइन, बियर जस्ता पदार्थको बिज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारले पनि यी बस्तुको विज्ञापनमा रोक लगाउने नीति तत्काल बनाउनु पर्छ ।
आजको नेपाली समाज अलि अराजकतर्फ उन्मुख भएको हो कि भन्ने भान सबैमा पर्न थालेको छ । हामी ससाना बालबालिका, बिशेष गरी सडक बालबालिकाहरु चुरोट तान्दै हिँडेको देख्छौँ । यस्तो चलन अन्त्य गर्नका लगि चलचित्र, म्युजिक भिडियो, टेली फिल्म आदिमा भिलेन र हिरोले चुरोट तान्दै फाइट हान्ने भएकाले ती क्षेत्रमा पनि चुरोट, खैनी, सूर्ति र रक्सीको प्रयोग नगर्न र त्यस्ता ‘सिन’ नदेखाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सरकारले आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली समाजमा देखा परेको चुरोट र रक्सीको संस्कृतीलाई कडाई गर्दै लान सकेको खण्डमा भोलिका लाखौँ, हजारौँ कलिला मस्कितष्क र मनहरुलाई आजैदेखि जोगाउँदै लान सकिन्थ्यो कि ?
Previous post आफ्नो मौलिकता अनी संस्कार जोगाउन सधैं लागिरहेको छु
Next post दाहालले ल्याए, ‘चेलीको मर्म’